Dawlada Puntland oo dacaayad raqiis ah ku tilmaantay eedayn ay ujeediyeen Siyaasiyiin mucaarad ah. ( Dhegayso ). – Radio Daljir
Diseembar 19, 2012 4:53 b 0
Boosaaso, Dec 19, Gudoomiye kuxigeenka Baarlamaanka Dawlada Puntland Md Salaad Xareed Cali oo waraysi siiyey barnaamijka Xulashadda ee ?Duhur walba ka baxa Radio Daljir ayaa sheegay inay sharci tahay Wakhtiga jiritaanka golayaaasha Dawlada Puntland oo ah shan sano.
Wuxuu sheegay in Dawlada Puntland wado qorshe dadka qof walba uu ku dooranayo qofka uu rabo isagoo tilmaaamay in rag qurbaha ka yimid ay doonayaan inay si sahlan kursi ku helaan.
” Adeer nin qurbaha ka yimid oo doonaya inuu afar qof qol ku xidho oo raba inuu si sahal ah kursi ku helo, adeer taasi socon mayso, waxaasoconaya rabitaanka shacabka,” ayuu yiri Salaad Xareed Cali.
Sidoo kale wuxuu sheegay in raga qurbaha ka yimid ee siyaasiyiinta ahi ay sheegaan dacaayado raqiis ah oo ay Dawlada ku dhaliilayaan waa sida uu hadalka u dhigaye.
” Waxaan dhahayaa hadaad qurbajoog tihiin oo caalamka ka timaadeen,Waxaan idin lee yahay hal sano waa afar beriye caqligu ha shaqeeyo ninkii maskax saliima raba inuu wax ku maamulo ha u diyaar garoobo sidii uu umada wax uga dhaadhacsiin lahaa,” ayuu hadalkiisa raaciyey Xildhibaan Salaad Xareed Cali.
Hadalka kasoo yeeray Xildhibaaan Salaad Xareed Cali oo kamid ah mudanayaasha Baarlamaanka Puntland ahna Gudoomiye kuxigeenka 1’aad ee Baarlamaanka ayaa kusoo beegamay xili Siyaasiyiin u ordaya xilka madaxtinimo ee Puntland ay dhaliil u jeediyeen Xukuumadda iyo Baarlamaanka Puntland.